Trending News | Makalukhabar.com
मुम्बईको एकै अस्पतालका २६ नर्स र ३ चिकित्सकमा देखियाे कोरोना
फाइल तस्विरचैत्र २४, मुम्बई । भारतको मुम्बईमा एकै अस्पतालका २६ नर्स र ३ जना चिकित्सकमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण देखिएकाे छ । मुम्बईको वोकहार्ट अस्पतालमा कार्यरत २६ नर्स र तीन चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण देखिएकाे भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । चिकित्सकहरु नै संक्रमित भ...जारी राख्नुहोस...
८ घण्टाको अपरेशनमा भयो होस् नै उडाउने घटना
चैत्र २४ । गत २४ नोभेम्बरमा एक ३५ वर्षीय महिला पाकिस्तानको लाहोरस्थित एक अस्पतालमा आफ्नो पायल्सको सामान्य शल्यक्रियाको लागी भर्ना भइन । तर उक्त शल्यक्रियाको लागी डाक्टरहरुले ८ घण्टा लगायो । त्यस पछी उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरियो । तर जब उनि घर पुगिन उनको यौनीमा निक्कै पिडा भइरहेको थि...जारी राख्नुहोस...
“धेरै त हैन, सय, पचास, बिस, तिस नभए एक प्याकेटको लागि भए पनि रात बिताउँछौ ! यदि ग्राहक आएनन भने त्यो रात हाम्रोमा अगेनो बल्ने छैन ! यसो ग्राहक आएपनि हुन्थ्यो नि कम्तिमा रोइरहेका लालबाला त चुप लाग्थे !” यो शब्द सुदुरपश्चिमको दुरदराज जिल्ला बझाङको सदरमुकामको चैनपुरको हो ! जहाँ जिवन धान्नका...जारी राख्नुहोस...
नेपाली भूमीमा फिलिपकाे मृत्यु : हिन्दु धर्म अनुसार दाहसंस्कार (भिडियाे हेर्नुहाेस्)
चैत्र २७, काठमाडाैँ । केही समय अगाडी बेवारिसे अवस्थामा वीर अस्पतालमा भेटिएको बेलायती नागरिक फिलिप माल्कोमको मृत्यु भएको छ । उनलाई वीर अस्पतालबाट कृस्टिना श्रेष्ठ र उनका साथीहरुको सहयोगमा त्यहाँबाट उद्दार गरी नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उपचार...जारी राख्नुहोस...
२०७६ सालमा पनि भूकम्प जान सक्छ ? राजनैतिक अवस्था कस्तो रहला ? २०७६ सालका केही भविष्यफलहरु
चैत २४, काठमाडौं । यो वर्ष को राजा पदमा शनि र मन्त्री पदमा सूर्य नियुक्त छन् भने परिधावी नामको संवत्सर रहेको छ । सूर्य ग्रह र शनि बिच शत्रुता एवम् वैरभाव उत्पन्न हुने गर्छ । फलस्वरूप राष्ट्रमा अराजकता र राजनैतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । यो वर्षको जगत् लग्न कु...जारी राख्नुहोस...